पत्रपत्रिका Archives - अभियान खबर
माग पूरा नभएसम्म नेका धादिङ र नुवाकाेटले फोहोर ब्यबस्थापनमा अबरोध गर्ने
निराजन बजगाइ नुवाकोट काठमान्डौ को फोहोर ब्यबस्थापन का लागी निर्माणधीन बञ्चेरे डाडाको काम अन्तीम चरणमा आउँदा स्यानीय बासीको अबरोध सिर्जाना गर्नाको निमित्त भेलाहरु भइरहेको छ । गत साता फोहोरमैला सँग सम्बन्धीत बासिहरूकाे नेपाली कांग्रोस नुवाकोट धादिङ्गले गत शुक्रबार बञ्चरे डाडामा भेला आयोजना गरेकाे हाे ।सो भेलाले निम्न मागहरु तया गरेको छ। १) वाताबरणीय प्रभाब मूल्यङकन प्रतिबेदन […]
तिहारको तिथि विवाद : कुकुर तिहार र लक्ष्मीपूजा एकैदिन किन ?
२८ कात्तिक, काठमाडौं । यो सालको भाइटीका मंसिर १ गते कि २ गते ? विवादले यतिबेला सांस्कृतिक क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले ४ दिनमा सम्पन्न हुने गरी तिहारको तिथि तय गरेपछि काठमाडौंका नेवार समुदायले आपत्ति जनाएका छन् । त्यसपछि यो विवाद अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि सतहमा आएको छ । […]
विजयादशमीको शुभ साइत सार्बजनिक
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विसं २०७७ को विजयादशमीलगायत दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०७७ कात्तिक १ गते शनिबारदेखि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ शुरु हुँदैछ । दुर्गा पक्षसमेत भनिने दशैँको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घरघरमा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी विशेष पूजासहित घटस्थापना गर्छन् । घटस्थापनाको साइत कात्तिक १ […]
सरकारले भन्यो : हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छैन
७ असोज, काठमाडौं । सरकारले हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण नगरेको बताएको छ । पछिल्लो समय चीनले नेपाली भूमिमा ९ वटा भवन बनाएको खबर आइरहेका बेला बुधबार परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यस्तै खबर २०७३ मा पनि आएको थियो । त्यसबेला […]
काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म देशभर वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । भारतको छत्तिसगढको उत्तरी क्षेत्रमा न्यून चापीय क्षेत्र रहेको र उक्त क्षेत्र पश्चिम–उत्तरपश्चिम सर्ने क्रममा रहेकाले अझै शनिबारसम्म देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् शान्ति कँडेलले बताइन्। मनसुन बाहिरिने औसत समय बुधबार अर्थात् सेप्टेम्बर २३ हो । […]
निद्राका विभिन्न प्रकार हुन्छन् र यसले मानिसलाई अनेकौं प्रकारले असर पार्छ । निद्रा बोलाउनका लागि केही मान्छे घन्टौंसम्म ओछ्यानमा यता र उता पल्टिन्छन् । ‘लौन, कुनै जादू मन्त्र पाएदेखि फुस्स निदाउँथें नि’ भनेर कल्पन्छन् यस्ता मान्छे । यस्ता मान्छेका लागि एउटा जादू उपाय आएको छ । यो हो एक्युप्रेसर र यसले अनिद्रा लगायत शरीरका धेरै […]
श्रीमान-श्रीमतीबचको सम्बन्धमा तनाव छ?यी उपाय अपनाउनुस् !
श्रीमान श्रीमतीबचको सम्बन्धमा तनाव छ भने यसमा तपाईहरुबीचको सम्बन्धले मात्र काम गरेको हुदैन । दुईजनाबीचको असमझदारीका कारण यस्ता समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारणमा वास्तु दोष पनि रहेको बताइन्छ । जसको हलका लागि तपाईले वास्तुका नियमलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बेडरुम लोकेसन बेडरुम सधैं दक्षिण पश्चिम वा उत्तर पश्चिम दिशातर्फ हुनुपर्छ । यसले पार्टनरबिच माया र […]
सोह्रश्राद्ध , यस्तो छ शास्त्रीय मान्यता
प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि शुरु हुने सोह्रश्राद्ध अर्थात् पितृ पक्ष शनिबारदेखि शुरु भएकाे छ । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका १६ वटा तिथिमा दिवङ्गत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिदादान र पिण्डदान गरिने भएकाले सोह्र श्राद्ध भनिएको हो । चाडपर्व यज्ञयज्ञादि तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्पराअनुसार […]
यी ५ गुण भएका व्यक्ति जीवनमा कहिल्यै असफल हुँदैनन् – चाणक्य नीति
भनिन्छ कि सफलता तथा असफलताको बीचमा यस्तो बिन्दु हुन्छ, जब तपाई न धेरै बढी सफल हुन सक्नुहुन्छ, न त धेरै असफल नै । त्यसो त सबै व्यक्ति सफल हुन चाहन्छन् । तर हामीमध्ये धेरै व्यक्ति यो सोच्दैनन् कि असफलताको कारण आफूमै हुन्छ । आचार्य चाणक्यले चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै कुरा उल्लेख गरेका छन्, जसलाई पालना […]
काठमाडौँ । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि दुई हप्ताको लागि ‘सटडाउन’ हुने भएको छ । मानवीय गतिविधि र आवतजावतमा थप कडाइ हुने भक्तपुरकी सिडिओ हुमकला पाण्डेले जानकारी दिइन् । तर तत्काल लकडाउन भने नहुने भउनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिइरहेका बेला आइतबारदेखि लागू हुनेगरी उपत्यकामा ‘सटडाउन’ को निर्णय गरिएको सिडिओ पाण्डेले बताइन् । शुक्रबार उपत्यकाका तीन जिल्लाका […]